Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Bay ayaa gaadhay Magaalada Buur-Hakabo | maakhir.com
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Bay ayaa gaadhay Magaalada Buur-Hakabo
Baydhabo:- Maamulka Gobolka Bay iyo Ciidamo ka tirsan Dawlada Somaliya ayaa maanta Barqadii gaadhay Magaalada Buur-Habako oo ay dhawaan gacan ku haynteeda la wareegeen Kooxaha ka soo horjeeda Dawlada, Masuuliyiintaas ayaa ka boqoolay magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Bay iyaga oo ujeedkoodu ahaa inay u kuur galaan xaalada ha halkaasi ka taagan.
Masuuliyiintii halkaasi maanta gaadhay oo uu hormuud u ahaa Gudoomiyaha Gobolka Bay iyo kan Degamada Baydhabo ayaa markii waxay bilaabeen inay Kulamo gooni gooni ah la qaataan Odayaal dhaqameedka Deegaanka iyaga oo diirada saarayay amuurihii ugu danbeeyay ee Deegaankaasi soo foodsaaray.
Odayaasha Deegaanka Buur-Hakabo iyo Masuuliyiinta maanta gaadhay Deegaankaasi ayaa la soo tabinayaa inay aad uga wada hadleen sidii Deegaanka Nabad waarta looga dhalin lahaa iyo waliba qaabkii loo waji lahaa Kooxaha ka soo horkeeda dawlada oo la sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan Hawdka Deegaankaasi ku dhaw.
Dhanka kale waxa la soo sheegayaa inay Ciidama Dawladu xidheen dhamaan wadooyinka iyo waliba Goobihii ganacsiga waxa ay dageen Buuraha ku teedsan Magaalada ,iyaga oo la socda dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan dadka Magaalada degan.
Deegaanka Buur-Hakabo ayaa dhawaan waxa gudaha u soo galay kooxo taabacsan Maxaakiimtii Islaamiga ahaa kuwaasi oo la sheegay inay dhamaan gacanta ku dhigeen Saldhigyadii ciidamada ee Deegaankaasi awal horay uga yegleelaa.
« Golaha wasiirada Puntland oo maanta ansixiyay xeerka soo saarida Macdanta Puntland
Doorashooyinka Dalka Malaysia oo ay isu diyaarinayaan Shacabka Dalkaasi »